किन आउँछ शरीरमा सेता धर्सा ? आखिर के हुन् यी सेता धर्सा ? थाहापाउनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
किन आउँछ शरीरमा सेता धर्सा ? आखिर के हुन् यी सेता धर्सा ? थाहापाउनुहोस्
अधिकांश महिलाको शरीरका विभिन्न भागमा सेता धर्सा देखिन्छ । पेट, हिप, पिँडौला, स्तनआसपासको छालामा सेता धर्सा बाक्लै हुन्छन् । छालामा आउने यस्ता सेता धर्साका कारण युवतीहरू बढी चिन्तित बन्ने गरेको पाइन्छ ।
शरीरका केही भाग खाली देखिने गरी साडी, ब्लाउजलगायत खुला कपडा लगाऊँदा सेता धर्साहरू दुनियााका नजरमा पर्न पुग्छन् ।
सेता धर्साकै कारण युवतीहरू सौन्दर्यमा आँच आएको महसुस गर्छन् । आखिर के हुन् यी सेता धर्सा ? किन आऊँछ ? छालारोग चिकित्सकहरू यसो भन्छन् :
शरीरमा सेता धर्सा आउने कारण विभिन्न छन् । केही रोगका कारण पनि यस्ता धर्सा आउने गरेको पाइन्छ । तर, अधिकांशमा आउने कारण भने एउटै छ । त्यो हो, छोटो समयमा शरीर अत्यधिक मोटाउनु र छोटो समयमै मोटोपन घट्नु ।
पेटमा सेता धर्सा भएर चिन्तित हुनुहुन्छ ?
मानिसहरु आफ्नो पेटमा भएका सेता धर्सा देखेर निराशिन्छन् । पुरुषमा भन्दा पनि महिलाहरुमा धेरै यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । छालामा आउने यस्ता सेता धर्साका कारण युवतीहरू बढी चिन्तित बन्ने गरेको पाइन्छ । शरीरका केही भाग खाली देखिने गरी साडी, ब्लाउजलगायत खुला कपडा लगाऊँदा सेता धर्साहरू दुनियाका नजरमा पर्न पुग्छन् । सेता धर्साकै कारण युवतीहरू सौन्दर्यमा आँच आएको महसुस गर्छन् ।
आखिर के हुन् यी सेता धर्सा ? किन आऊँछ ?
यसबाट छुट्कारा पाउनका लागि के गर्ने ?
विषेश औषधि हो, घ्यूकुमारी अथवा एलाभेरा । घ्यूकुमारी काटेर धर्सा परेको भागमा केही समय दल्नुहोस् । त्यसपछि मनतातो पानीले धुनुहोस् । तपाई यो प्रक्रियामा एक चौथाई एलोभेराको जेल, भिटामिन ए, इको क्याप्सुललाई आपसमा मिसाएर पनि दिनहुँ दल्न सक्नुहुन्छ । केही दिनमा तपाईले आफ्नो छालामा आएको परिवर्तन महसुस गर्नुहुनेछ ।
यसैगरी दैनिक १० ग्लास पानी पिउँनुहोस् । पानी पर्याप्त पिउनाले छालामा भएका स–साना प्लानहरुलाई सफा राख्न र उपचारका अन्य विधि सफल बनाउन पानी आवश्यक हुन्छ । छाला सुन्दर बनाउन चाहनले चिया, कफि सोडाबाट चाहिँ बच्नै पर्छ ।
यस्तै चिनी पनि यसको अचुक उपाय हो । चिनीमा यस्तो धर्सा हटाउन सक्ने गुण हुन्छ । एक चम्चा चिनी, आल्मन्डको तेल थोरै र केही थोपा कागतीको झोल मिसाउनुहोस् । राम्रो मिश्रण तयार पार्नुहोस् र त्यसलाई धर्सा भएको स्थानमा लगाउनुहोस् । १० मिनेटपछि धुनुहोस् । एक महिनासम्म यसो गर्नाले तपाईको छालामा आएको परिवर्तन हेरेर आफै दंग हुनुहोस् ।
यसैगरी ओलिभ आयलले पनि तपाईंलाई यस्तो दागबाट छुट्कारा दिलाउने छ । यमा महत्वपूर्ण पोषक, एन्टिअक्सिडेन्ट हुनेभएकाले यसले तपाईको छालालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । ओलिभ आयलमा भएको भिटामिन ए, डी र इले छालालाई सुन्दर बनाउँछ । ओलिभ आयलले धर्सा भएको स्थानमा मसाज गर्नुहोस् । एकघण्टा पछि धुनुहोस् ।
तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ । आलुमा धेरै किसिमका भिटामिन र खनिज हुन्छ । यसले छालाको कोष निर्माण र उपचारमा सघाउ पुर्याउँछ । आलुलाई स्लाइसलाई जस्तै पातलो गरेर काट्नुहोस् । त्यस्तो स्लाइसलाई धर्सा भएको स्थानमा केही मिनेट दल्नुहोस् । छाला सुख्खा भएपछि मन तातो पानीले धुनुहोस् ।
Don't Miss it के तपाईलाई थाहा छ, बच्चाको विकास कति बर्षमा कति प्रतिशत हुन्छ ? जान्नुहोस्
Up Next शाकाहारी गर्भवती महिलालाई भिटामिन बी १२ को कमी हुन सक्छ, त्यसैले के गर्ने के नगर्ने ?
यस्ता खालका रोग लागेमा खानपानमा ध्यान पुर्याउनुस् है – यी रोग लागेमा के खान हुन्छ के हुदैन ?
मानिसहरु खानपानमा वेवास्ता गर्छन् जसका कारण विभिन्न रोगहरु लाग्ने गरेका छन् । स्वादका लागि मिठो खाना तर्फ आकर्षित हुँदा विभिन्न…
होटलमा पाइने मिठो आलु चिल्ली घरमा यसरी बनाउँनुहोस् – सम्पुर्ण जानकारी सहित भिडियो पनि
भिडियो पोस्टको अलिक तल छ तर भिडियो भन्दा माथि र तलका जानकारी पनि उपयोगी छन् । पढ्नुहोला । आलु सबैको…
3 months ago mygyanbigyan
मार्टिन लुथरका जीवन उपयोगी प्रेरक भनाईहरु
मार्टिन लुथरको जन्म सन् १४८३ मा भएको थियो । उनी प्रोफेसर, लेखक तथा धार्मिक गुरुका रुपमा प्रसिद्द छन् । सन्…
प्रेरक भनाइहरुको यति विशेष संगालो यहाँ राखिएको छ – सकारात्मक सोचको भिडियो सहित
भिडियो पोस्टको अन्तिममा राखिएको छ तर भिडियोमा पुग्नु भन्दा अगाडी त्यो भन्दा माथिको लेख पढ्न अनुरोध गर्दछौँ । पौराणिक शास्त्रहरुमा…
असफलता सम्बन्धि प्रसिद्द भनाइहरू – हेर्नु पर्ने भिडियो
भिडियो पोस्टको अन्तिममा राखिएको छ तर भिडियोमा पुग्नु भन्दा अगाडी त्यो भन्दा माथिको लेख पढ्न अनुरोध गर्दछौँ । यो गोविन्द…
दाँतको सफाई बाहेक यी हुन् मञ्जनको उपयोगी फाइदाहरु
दाँतको सफाइको लागि वा ब्रस गर्नको लागि हामीलाई नभई नहुने चीज हो टुथपेस्ट । यसले दाँतबाट दुर्गन्ध टाढा गरेर त्यसलाई…
जाडाेमा ल्वाङ चिया पिउनुका फाइदा, जानिराखौ
चिया हाम्रो संस्कार हो । अधिकांश नेपालीलाई बिहान उठेपछि एक कप चिया पिउनैपर्छ । अझ सहरी क्षेत्रमा त भेटघाट वा…
निहुरिएर लामो समयसम्म मोबाइल चलाउने बानीको यस्ता छन् बेफाईदा
स्मार्ट फोन बोक्दैमा मान्छे पनि स्मार्ट देखिने भ्रमले हामीहरु यसको उचित प्रयोग गर्न नजान्दा जीवनमा धेरै समस्याहरु आइपरेका हुन्छ ।…
9 months ago mygyanbigyan
यस्ता ठाउँमा पाइने च्याउ खानु त के छुनुसम्म हुँदैन, थाहापाइराख्नुहोस
मानव शरीरका लागि च्याउ अति उत्तम पौष्टिक आहार हो तर त्यही च्याउलाई ननिचेर खाँदा विषको रूपमा परिणत हुने गर्दछ ।…
गिजाकाे समस्या देखी छाती दुख्ने समस्या सम्म राहात मिल्छ ल्वाङ चिया पिउनुदा, जानिराखाैँ
यदि तपाईं पनि चियाको शौखिन हुनुहुन्छ र विहानै चिया पिएर दिनको सुरुवात गर्न चाहनु हुन्छ भने अबदेखि ल्वाङ राखेर चिया…
घरेलु उपचार (53)